Wararkii ugu dambeeyay xiisadda ka taagan deegaanka Godinlabe iyo xaaladda sida ay tahay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay xiisadda ka taagan deegaanka Godinlabe iyo xaaladda sida ay tahay
Wararkii ugu dambeeyay ee saakay laga helaayo deegaanka Godinlabe ee gobolka Galgaduud ayaa ah mid degan, iyadoo ay maanta jirto xiisad colaadeed oo ka dhex taagan ciidamada kala taabacsan maamulada Galmudug iyo kuwa Ahlu-sunna Waljameeca.
Ciidamada Galmudug ayaa maanta gacanta ku haaya inta badan deegaanka Godinlabe ee gobolka Galgaduud, waxaana la sheegayaa in ciidanka Ahlu-sunna Waljameeca ay weli ku sugan yihiin duuleedka deegaankaasi.
Labadaasi dhinac ayaa shalay dagaal culus ku dhexmaray deegaanka Godinlabe, waxaana dagaalkaas uu ahaa mid la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Dagaalkaasi ayaa yimid kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa nabad-sugidda Galmudug ay weerar ku qaadeen koox maleeyshiyo ah oo isbaaro u taalay deegaanka Godinlabe, iyadoona dagaalkaasi ay markii dambe kusoo biireen kuwa Ahlu-sunna Waljameeca oo dagaalka isku-baheystay maleeyshiyadii, taas oo keentay inuu dagaalka sii xoogeysto.
Ciidanka Ahlu-sunna oo markii hore la wareegay gacan ku haynta deegaanka Godinlabe ayaa dib looga saaray deegaanka, kadib markii ciidamo uu horkacaayo madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed ay dagaal rogaal celis ah halkaasi ku qaadeen.
Inta la xaqiijiyay waxaa dagaalkii shalay ku geeriyootay ilaa 4 qof oo uu ku jiro taliyihii ciidanka Ahlu-sunna Waljameeca Axmed Dheere iyo dhinacyadii dagaalay, iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacantay tiro intaasi ka badan, inkastoo aan la xaqiijin karin inta ay gaarsiisan tahay tiradda dhaawaca ah.
Dhaq-dhaqaaqa ganacsi iyo isku socodka gaadiidka ee ka jiray deegaanka Godinlabe ayaa saakay ah kuwa hakad ku jira, iyadoona shacabka ku nool deegaankaasi ay ka cabsi qabaan in markale ay halkaasi ku dagaalamaan ciidamada Galmudug iyo kuwa Ahlu-sunna Waljameeca.
Xiisadaan colaadeed ee ka dhex taagan Galmudug iyo Ahlu-sunna Waljameeca ayaa kusoo beegmaysa xilli la isku diyaarinaayo ololaha doorasho ee dalka, waxayna maamulka Ahlu-sunna sheegeen in ciidamada Galmudug ay ka dhinac dagaalamayaan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya, taas oo aan si dhab ah loo xaqiijin karin.
Ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha dowladda federaalka Soomaaliya oo ay kaga hadlayaan eedeymaha kasoo yeeray maamulka Ahlu-sunna Waljameeca.